တိုးတက်သော SMB ၏မြင့်တက် | Martech Zone
စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအတွက်အခွင့်အလမ်းကိုအသိအမှတ်ပြုခြင်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမှာသင်၏ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုသင်၏ဖောက်သည်များမည်သို့အသုံးပြုနေသည်ကိုနားလည်ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်သားအင်အားသည်အသေးစားနှင့်အလတ်စားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကဏ္changingတွင်သိသိသာသာပြောင်းလဲနေသည်။ အကယ်၍ သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသည် SMB လုပ်ငန်းများကိုလုပ်ဆောင်လျှင်၊ သင်သည်ဝေးလံခေါင်ဖျားသောလုပ်သားအင်အားနှင့်သေချာစေရန်လိုအပ်သည် ပူးပေါင်း tools များ သင်၏ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများကိုအပြည့်အ ၀ မြှင့်တင်ရန်အတွက်ဖြစ်သည်။
သင်က B2C ဖြစ်ပါက၊ အလုပ်ချိန်များသည်ပြောင်းလဲနေသည်နှင့်ဝယ်ယူမှုအလေ့အထများပြောင်းလဲနေသည်ကိုနားလည်ပါ။ လက်လီအရောင်းဆိုင်များသည်နေ့နှင့်စနေ၊ တနင်္ဂနွေများတွင်ဖောက်သည်များအား ၀ န်ဆောင်မှုပေးနေစဉ်၊ အကယ်၍ သင်သည်ဤအပြောင်းအလဲကိုအခွင့်ကောင်းယူခြင်းမရှိပါကသင်ပျောက်ဆုံးနေသည်။
မကြာသေးမီနှစ်များတစ်လျှောက်ကျွန်ုပ်တို့သည် SMB ၏အဖွဲ့ငယ်တစ်ခုဖြစ်သော“ Progressive SMB” အဖွဲ့များသည်သူတို့၏ပြိုင်ဘက်များ၏ကြီးမားသောနယ်မြေကိုပိုမိုထိုးဖောက်ဝင်ရောက်လာကြသည်ကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ သို့သော်အဘယ်အရာကိုတစ် ဦး SMB တိုးတက်သောစေသည်? Cisco ၏ infographic မှ တိုးတက်သော SMB ၏ထ.
အဆိုပါ Multidimensional စျေးကွက်၏ထ
8:2012 pm တွင်နိုဝင်ဘာ 12, 59
မင်းရဲ့ထင်မြင်ချက်တွေကိုငါသဘောတူတယ်၊ ဒါပေမယ့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းကို B2C နဲ့ကန့်သတ်မှာမဟုတ်ဘူး၊ B2B ကအခြေအနေတူတူပဲ။
8:2012 pm တွင်နိုဝင်ဘာ 1, 16
လှပသောသတင်းအချက်အလက်နှင့်နည်းပညာနှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုပြောင်းလဲခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ အလွန်ကြီးစွာသောထိုးထွင်းသိမြင်မှုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်သည်လူမှုရေးလုပ်သားအင်အားသစ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်ကျွန်ုပ်၏လက်ရှိအလုပ်တန်ဖိုးများနှင့်တိုးတက်သော SMB နည်းဗျူဟာများကိုကျင့်သုံးမည်၊ သူတို့၏အဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သောအခါအဓိကအရောင်းရဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ လုပ်သားအင်အားအသစ်သည်အင်တာနက်ပေါ်တွင်နှင့်တကယ့်ဘ ၀ တွင်တစ်ပြိုင်နက်မည်သို့နေထိုင်သည်ကိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသည်ဟုကျွန်ုပ်ထင်မြင်မိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတို့၏လုပ်ငန်းခွင်ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်တူညီသောပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ခြင်း၊
9:2012 pm မှာနိုဝင်ဘာ 5, 08
ကောင်းမွန်သောအချက်အလက်များ! တိုးတက်သော SMB အကြောင်းများစွာနားလည်သည်။
9:2012 pm မှာနိုဝင်ဘာ 5, 28
ပုံဥပမာမှတဆင့်နောက်ထပ်အကြီးအ post ကို။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် infographic နှင့်သင်ဒေါက်ဂလပ်ရန်။ သင်အကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍ သင်ဖော်ပြလိုသည့်အရာကိုသရုပ်ဖော်။ ပြရသောအခါ၎င်းသည်အံ့သြဖွယ်ဖြစ်သည်။ ပြီးတော့ကျွန်တော့်ကိုယုံပါ၊ အဲဒါတွေအားလုံးကိုစာပိုဒ်များစွာထဲမှာထည့်ပြီးဖတ်တာထက်ထိရောက်တယ်။